यदि मेरो GX30 स्वत: नवीकरण हुन असफल भएमा के हुन्छ ?
अपर्याप्त ब्यालेन्स वा एकाउन्ट निष्क्रिय अवधिमा रहेको खण्डमा ग्राहक सदस्यता सेवा स्वत: नवीकरण हुन असफल हुन्छ । सिस्टमले अर्को दिन मात्र ग्राहक सदस्यता सेवालाई पुन: नवीकरण गर्न प्रयास गर्नेछ
के मैले यस ग्राहक सदस्यता सेवाको स्वत: नवीकरणलाई रोक्न सक्नुहुन्छ ?
तपाईंले स्वत नवीकरणलाई UMB मार्फत *118*1*4# मा रोक्न सक्नुहुनेछ
के म निष्क्रिय अवधिमा GX30 को ग्राहक बन्न सक्छु ?
होइन, तपाईं निष्क्रिय अवधिमा GX30 को ग्राहक बन्न सक्नुहुन्न
के निष्क्रिय अवधिमा मेरो GX30 स्वतः नवीकरण हुनेछ ?
हुँदैन, निष्क्रिय अवधिमा तपाईंको GX30 स्वतः नवीकरण हुने छैन
यदि स्वतः नवीकरण असफल भयो तर दोस्रो प्रयासमा ग्राहक सदस्यता सेवा नवीकरण गर्न सफल भएमा मेरो प्रयोग नगरिएको हटस्पट कोटा ब्यालेन्सको के हुनेछ ?
प्रयोग नगरिएको कुनै पनि हटस्पट कोटा ब्यालेन्सलाई हटाइनेछ र पहिलो स्वतः नवीकरण असफल भएर दोस्रो प्रयासमा स्वतः नवीकरण सफल भएतापनि नयाँ ग्राहक सदस्यता सेवामा सर्नेगरी जोडिदैन
यदि (सेवाहरू नवीकरण गर्नको लागि) दोस्रो पटकको नवीकरण प्रयास पनि असफल भएमा के हुनेछ ?
तपाईंको ग्राहक सदस्यता सेवा स्वत: बन्द हुनेछ र प्रयोग नगरिएको कुनै पनि हटस्पट कोटा ब्यालेन्स फिर्ता लिइनेछ
मैले GX30 लाई कति पटकसम्म एक्टिभेट गर्नसक्छु भन्ने बारेमा के कुनै सीमा हुन्छ ?
छैन, तपाईंले एक्टिभेट गर्नसक्ने सङ्ख्यामा कुनै पनि सीमा छैन
मेरो मासिक निर्धारित कोटाको अतिरिक्त मैले कसरी थप हटस्पट कोटा प्राप्त गर्न सक्छु ?
तपाईं कुनै स्पिड क्याप बिना 3GB हटस्पटको लागि Hotspot Booster (हटस्पट बुस्टर) को ग्राहक बन्न सक्नुहुन्छ जोकि मात्र RM3 मा3दिनको लागि मान्य हुन्छ । यो पूरक सेवा GX30 प्लानमा मात्र उपलब्ध छ
के मैले मेरो अनलिमिटेड डाटाको गतिलाई बढाउन सक्छु ?
हो, तपाईं Turbo Booster (टर्बो बुस्टर) को ग्राहक बनेर आफ्नो अनलिमिटेड डाटा (भिडियो तथा म्युजिक स्ट्रिमिंगसहित) को स्पिड क्यापलाई हटाउन सक्नुहुन्छ जोकि मात्र RM5 मा 24 घण्टाको लागि मान्य हुन्छ । यो पूरक सेवा GX30 डाटा प्लानको लागि मात्र उपलब्ध छ
के म एउटै समयमा धेरै Hotspot Booster तथा Turbo Booster को ग्राहक बन्न सक्छु ?
होइन, तपाईं एउटै समयमा समान प्रकारको धेरै बुस्टरहरूको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्न र तपाईंले तपाईं अर्को बुस्टरको ग्राहक बन्नुभन्दा अगाडि आफ्नो हालको बुस्टर कोटा वा वैधता अवधि समाप्त नहुँदासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, तपाईं एउटै समयमा धेरै Hotspot Booster हरूको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्न । यद्यपि, तपाईं एउटै समयमा Hotspot Booster (हटस्पट बुस्टर) तथा Turbo Booster (टर्बो बुस्टर) दुवैको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्छ । दुवै बुस्टरहरूको ग्राहक सदस्यता सेवा लिएपछि हटस्पटको कुनै पनि प्रयोग Hotspot Booster को प्याकेटबाट काटिनेछ र तपाईंले स्पिड क्याप बिना आफ्नो अनलिमिटेड डाटाको मजा लिन सक्नुहुन्छ